C/raxmaan C/shakuur oo talooyin iyo baaq ku saabsan Fayraska Coronavirus u jeediyay Madaxda Dowladda - Jowhar Somali Leader
Home Somali C/raxmaan C/shakuur oo talooyin iyo baaq ku saabsan Fayraska Coronavirus u jeediyay...
C/raxmaan C/shakuur oo talooyin iyo baaq ku saabsan Fayraska Coronavirus u jeediyay Madaxda Dowladda
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa ugu baaqay Madaxda dowladda inay shacabka horyimaadeen, ayna muujiyaan hoggaan, si shacabka uga helaan xog sugan oo ku saabsan arrimaha Coronavirus.
C/raxmaan C/shakuur ayaa sheegay in howshan hoggaankeeda aanay ku filneyn Wasaarad kaliya, isla markaana adduunka oo dhan madaxdooda ay hoggaaminayaan.
Halkan hoose ka akhriso:–
Waxaan ugu baaqayaa madaxda dowladda in ay shacabka horyimaadaan, hoggaanna muujiyaan, si shacabka ay u helaan xog sugan oo la xariirta Fayriska Karoona. Hawshan hoggaankeeda kuma filna wasaarad, adduunka oo idilna madaxda sare ayaa hoggaamineysa dadaalka lagula tacaalayo Karoona Fayris. Waxay ahayd in horay loogu diyaargaroobe, dhowr jeer oo horena hoggaanka dawlada waan xasuusinay, laakiin talaabooyin wax ku ool ah lama qaadin . Haddaba waa in talaabooyin kan siyaasadeed iyo farsamo degdeg loo qaado.
Kaalinta hogaanka siyaasadeed waa in
1- Madaxdu ay dadka horyimaadaan, runtana u sheegaan, oo ay ugu horreyso inta ay tabarteenna la tacaalida la egtahay, xagga qalabka baaritaanka, qolalka daryeelka sare, qalabka oksijiinka caadiga ah iyo ogsijiinka mashiinka ah.
2- Waa in ay hawshan la gaarsiiyo heer Golaha Amniga Qaranka ka wada hadlo, kaasoo ay ku jiraan guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo madaxda dowlad goboleedyada. Wadahadalku wuxuu noqon karaa warbaahinta la iska arko. Waa in joogto looga tashadaa sida looga hortegi karo aafada Fayriskan dilaaga ah.
3- In si wadajir ah loo qaato go’aamo la is waafajinayo bedqabka dadwaynaha, iyadoo la tixgelinayo saamaynta dhaqaale ee go’aanadaas, maadama inta badan dadkeenu ku nool yihiin waxa kasoo gala xoogsi maalmeedka.
4- In la dhiso guddi ganacsato, bulshada rayadka ah, culimada iyo waxgarad ah oo qayb ka noqda abaabulka istaakulaynta bulshada .
1- Waa in dhiso guddi khubaro saynis iyo dhakhaatiir isugu jira, lehna gudoomiye aqoon durugsan u leh cudurada faafa, si ay dadwaynaha maalin walba ula socod siiyaan halka uu xaal marayo.
2- Farriimo iyo talooyin wacyi gelin uu Guddigu hormuud u yahay oo ay dhammaan qaybaha bulshada saameynta ku leh ka wada qeyb qaataan.
Fayriska Karoona waxaa looga samatabixi karaa, Alla oo la tala saarto laguna kabo taxaddar, digtooni, farriimaha iyo talooyinka khubarada caafimaadka oo la raaco.
Nabigeeenna (NNKH) wuxuu yiri “Hashaada xiro, Ilaaheyna talo saaro”